होचो हुनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक ! « Light Nepal
Published On : 22 March, 2018 3:29 pm
एजेन्सी – के तपाईलाई अग्लो हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । निःशन्देह अझै पनि धेरै मानिस अग्लो हुन नै मन पराउँछन् । अग्ला मानिस धेरै हिड्न सक्ने, आर्कषक र सफल हुने आम विश्वास छ । त्यस्तै पछिल्ला दिनमा महिलको उचाईलाई धेरै महत्व दिइन्छ । अग्ला महिला पुरुषको तुलनामा अझ बढी आकर्षक देखिन्छन् भन्ने मान्यताले पनि आम महिलामा उचाई बढिदियोस् भन्ने चाहना बढिरहेको पाइन्छ । हो, मानिसहरु आफ्नो उचाईबारे गुनासो गरिरहेकै बेला होचो हुनु ( पुड्को होइन, औषत उचाइ) स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको एक अध्ययनले दर्शाएको छ ।
धेरै वर्ष बाँच्छन्ः अमेरिकाको पीएलओएस ओनमा प्रकाशित एक जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन अनुसार छोटो कदका मानिसको जीवन अग्लो कद भएकाहरु भन्दा लामो हुन्छ । अध्ययनमा ८ सय जापानी र अमेरिकी महिलामा ४० वर्षसम्म अध्ययन गरिएको थियो । अग्लाहरु होचोको तुलनामा बढी रोगी हुने अध्ययनमा देखाइएको थियो ।
क्यान्सर खतरा कमः क्यान्सर कज एन्ड कन्ट्रोल नाम दिएको सन् २०१४ को एक अध्ययनमा अग्ला मानिसलाई क्यान्सर र क्यान्सरजन्य खतरा हुने दर्शाइएको छ । अध्ययनमा क्यान्सरको उपचार गएिका ३८ हजार ८ सय ६२ सहभागी थिए । अन्य धेरै अध्ययनले पनि अग्ला महिलामा अन्डासय र स्तन क्यान्सरको खतरा देखाएको थियो । त्यस्तै अग्ला पुरुषलाई कोलोन, रेक्टम र प्रोस्ट्रेट क्यान्सरको खतरा हुने गर्छ ।
रगत जम्ने खतरा न्युनः निश्चय नै अग्ला मानिसका लागि यो दुखद समाचार हुन सक्छ । तर वास्तविकता भने यही हो ।अग्लो व्यक्ति लामो समयसम्म निष्क्रिय बस्यो भने बारम्बार रगत जम्ने समस्या वा रक्तनलीसँग सम्बन्धित अन्य समस्याले पीडित बन्न सक्छ । गत वर्ष जर्नल अफ थोर्मबोसिस एन्ड हेमोस्टासिसमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार १ सय ९५ सेमी देखि २०० सेमीका मानिसलाई दुई भन्दा बढी पटक रगत जम्ने समस्या देखिएको थियो ।
न्युरोलोजिस्त डेभिड इगलम्यानका अनुसार होचा मानिसको तुलनामा अग्ला मानिसले संसारलाई अलि धिमा गतिमा अनुभव गर्छन् । अग्ला मानिसले होचाको तुलनामा १० भागको १ भाग ढिलो आफ्ना आँखा, कान, जिब्रो र छालामार्फत चेतनायुक्त तथ्यांक (सेन्सरी डाटा) प्राप्त गर्छन् । अग्लो मानिसको दिमागको स्नायुको मार्ग अलिक लामो भएकोले दिमागले लिने सूचना र संकेतमा पनि ढिलाई हुन्छ । इगलम्यानका अनुसार यही ढिलाईका कारण जहिलेपनि वर्तमान अतित भइसकेको हुन्छ ।
– दी हेल्थ साइट
बुटवल, ७ बैशाख । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी जुटाउन हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था कतिपय विद्यालयहरुमा अझै
अंग्रेजलाई घुँडा टेकाएको जितगढीमा पहिलो पटक यसरी मनाइयो विजय उत्सव (फोटो फिचर)
बुटवल ७ बैशाख । नेपालले अंग्रेजलाई हराएको बुटवलमा रहेको ऐतिहासिक जितगढी किल्लामा विजय उत्सव मनाइएको
चितवन, ७ वैशाख । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति
क्यारमबोर्डको सट्टा अन्य खेल सामग्री
भीमदत्तनगर, ७ वैशाख । गाउँमा दिनभरजसो युवाले सार्वजनिकस्थल र चोकहरुमा क्यारमबोर्ड खेलेर समय खर्चिने गरेका
वाह ! यस्तो पो सामुदायिक विद्यालय,
संघीय प्रणालीको खर्च जनताले धान्न सक्दैनन्
अंग्रेजलाई घुँडा टेकाएको जितगढीमा पहिलो पटक
निकुञ्जको ७० करोड आम्दानी मध्यवर्ती क्षेत्रका